Azoko atao ve ny manatsara ny SEO miaraka amin'ny fomba amam-panazavana?
Amin'ny ankapobeny, misy karazana backlinks roa samihafa mba hanatsarana ny votoatin'ny sehatry ny sehatry ny tranonkalanao sy ny fizahantany pejy - ny voalohany dia manome tombony ho an'ny andaniny roa (manome-and-take), ary fomba iray ahafahana mamerina indray. Alohan'ny zavatra hafa, avelao aho hanome valiny hentitra - eny, ny fomba iray ahafahana mamadika ny SEO anao. Ary ankehitriny, aoka isika haneno lalina ao anatin'ilay raharaha.
Voalohany indrindra, mila mampiavaka ny karazana rohy roa samy hafa isika. Avy eo aho dia hanolotra fanazavana fohy momba ny fahitana ny tranonkalanao amin'ny aterineto ianao ary fomba iray ahafahana mamerina indray. Ary dia hamita izany amin'ny toro-hevitra mahasoa sasany izahay mba hanampiana anao hahatakatra ny fomba ahafahana mahazo fomba iray ahafahana mivadika - haingana sy miadana.
Araka ny famaritana, ny adiresy back-and-take dia andoavina amin'ny rohy original izay mampifandray tranonkala mahaleotena maro ho an'ny fifanarahana fantsona sy tranokala avo lenta kokoa. Eny, ny rohy toy izany dia tsara ho an'ny fifamoivoizana bebe kokoa. Na eo aza izany, ny antonontonony roa mitambatra dia matetika tsy manam-pahataperana loatra mba hahazoana manampahefana ambony iray, na fanatsarana tsara kokoa. Mihevitra izy ireo fa sarotra ny mamorona, manitsy ary manodina mihitsy aza, tsy heken'ny mpamily fikarohana ny backlinks mahazatra toy ny fitaovana mahery vaika SEO hananganana fanatanjahantena goavana amin'ny aterineto ho an'ny tranonkala. Tianao ve ny hahita fandrosoana mikajy kokoa? Eto dia rehefa tonga amin'ny fomba iray ny backlinks.
Backlinks iray (Wayne)
Toa hita fa ny rohy toy izany dia natao hanondroina tranonkala tokana tsy misy fangatahana ho an'ny rohy niverina ho valiny. Araka ny fitadiavana milina fitadiavana, toa an'i Google, sy Yahoo ary Bing, ireo rindran-damina ireo dia nahazo hery lehibe kokoa hifehezana ny fahefan'ny vohikala ao amin'ny vohikala, ary noho izany ny mety ho fanantenana tsara kokoa hanatsarana ny fitadiavana an-tserasera.
Mariho anefa fa misy fitsipika hentitra sy fitsipika hentitra napetraky ny Google mba hahatonga ny lalao maimaim-poana ho an'ny pejy Internet amin'ny Internet. Izany no antony mahatonga ny famolavolana fomba iray hiverenana dia mila ny masonareo marina ary matetika ny fanamarinana fa ny tsirairay, na dia ny antsipiriany indrindra aza, dia efa eo amin'ny toerany. Raha tsy izany, mety ho simba ny ezaka rehetra ataonao - fotsiny ny fandraràna ny fanitsakitsahana ny fitsipika, na amin'ny fotoana tsy fantatra, amin'ny fahadisoana, na amin'ny tanjona.
Mazava ho azy, misy fomba telo samihafa hanamboarana lalana iray miverimberina - amin'ny fampiasana orinasa fampandrosoana web na petra-kevitry SEO feno, mampiasa fitaovana rindrambaiko mifandraika amin'ny rindrankajy, ary manao izany an-tanana (mazava ho azy fa tsy kilalao miaraka amin'ny tongotra roa havia). Ny fanofanana ny asa dia midika hoe tokony hahatakatra izay tokony hatao ianao ary amin'ny filaminana izay mety hampifanaraka ny tanjon'ny orinasa.
Izany no mahatonga anareo manoro hevitra mafy anareo mba hanomboka amin'ny fijerena ny fitaovana fananganana rindrambaiko samihafa mba hahazoana ny fahalalana ilaina momba ny voanjo sy bolety. Raha ny fizotry ny fikarakarana, mazava ho azy, asa iray tena mandany fotoana izany, nefa mbola mandoa ihany izy, satria hahazo ny zavatra rehetra azo ovaina kokoa, tsy mandany vola dolara mba hamitana ny asa. Na dia izany aza, matetika dia lasa safidy tsara ny anjaran'ny liona mpikarakara webmasters izay te-hiteny fotsiny fa tsy hamonjy vola fotsiny, fa hampiasa ny traikefany amin'ny maha-matanjaka azy amin'ny hoavy Source .